DAAWO+XOG: Maxaan ka ognahay Safarka Wafdiga ka socda Eritrea ee la kulmay M/weyne Farmaajo? – Puntlandtimes
DAAWO+XOG: Maxaan ka ognahay Safarka Wafdiga ka socda Eritrea ee la kulmay M/weyne Farmaajo?
April 6, 2019 W LAASCAANO
MUQDISHO(P-TIMES)- Wasiirka arrimaha dibada ee dalka Eritrea Cusmaan Saalix iyo Lataliyaha sare ee arrimaha Siyaasadda Madaxweynaha dalkaas Yemane Gebreab ayaa booqasho ku tagay caasumada Soomaaliya ee Muqdisho, taas oo ay kula kulmeen Madaxweynaha dawladda Faderaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay wehliyaan Ra’iisulwasaare kuxigeenka iyo Wasiirka Arrimaha dibada ee Soomaaliya.
Kulanka oo ka dhacay Qasriga Madaxtooyada ee Muqdisho, waxaan faahfaahin badan laga heynin arrimaha laga wada hadlay, marka laga reebo war kooban oo ay Madaxtooyadu faafisay oo ah in laga hadlay arrimaha Somaliland wada hadalkooda, Isbedelada Geeska Afrika iyo xariirka labada dhinac.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu helay xog cadeynaysa in labada dhinac ay ka wada hadleen damaca Xukuumadda Asmara ee kuwajahan in wada hadalada dawladda Faderaalka iyo Somaliland ay noqdaan kuwa ay agaasimaan wadamada Itoobiya iyo Eritrea, si loogu garwaaqsado xaaladda gobalka.
Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo hadda isku arka Hoggaamiyaha gobalka ayaa dhambaal qoraaleed u soo diray dhigiisa Soomaaliya, wuxuu ka codsaday in ay dawladda Faderaalku ka aqbasho dalabka ah in uu noqdo Dhexdhexaadiyaha Xukuumaddaha Muqdisho & Hargeysa.
Wasiirka Arrimaha dibada Eritrea Cusmaan Saalix wuxuu dhawaan tagay Somaliland oo uu joogay mudo dhan labo maalmood, Xukuumadda Hargeysa waxay daaha ka rogtay in ay ka wada hadleen arrimaha la hadalka Muqdisho iyo sidii wadamada gobalka u yeelan lahaayeen doorka ugu weyn uguna wanaagsan.
Xukuumadda Asmara waxay hadda aad uga soo horjeeda saameynta gobalka ee wadamada Turkiga iyo Qadar, Dawladda faderaalka ee Muqdishana waxay ku tiirsan tahay taageerada Maaliyadeed ee ay ka hesho Xukuumaddaha Qadar iyo Turkiga, taas oo laftirkeedu arrimaha laga wada hadlay kamid ah.
Asmara iyo Addis Ababa, waxay hadda doonayaan in ay noqdaan kuwa saameyn ku yeesha xaaladda isbedelada ka socda Marin biyoodka muhiimka ah ee ay ku tartamayaan wadamada Carbeed, sidaas oo kalena waxay xooga saarayaan in ay Soomaaliya u noqoto mid dhankooda raacsan.
Lama garanayo sidda ay Madaxtooyada Soomaaliya uga jawaabtay dalabka Madaxweynaha Asmara ee kuwajahan in uu noqdo dhexdhexaadiyaha koowaad ee wada hadalsiinta Muqdisho iyo Hargeysa, haddii ay taasi suuragashana wax badan ayaa iska bedelaya sidda muuqata Siyaasadda Soomaalida oo dhan.
Dabeyl siyaasadeed oo aan dabyar shideyn ayaan ka taagan mandiqada geeska Afrika, waxana laga welwelsan yahay jikada ay u qaadi doonto Soomaaliya, oo hadda u kala googan dawlad gobaleedyo iyo dawladda Faderaalka, waxaana halista ugu badan laga qabaa in loolan gobaleedku uu Soomaaliya u horseedo burbur kale.
Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda dalka Eritrea oo uu hoggaaminayay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalkaas Mudane Cismaan Saalix.
Posted by Villa Somalia on Saturday, April 6, 2019